> Resource > iPad > Sida loo Delete nuqul Songs on iPad
Waxaan ogaaday in aan heeso nuqul on iPad, laakiin aan ku Lugood on my PC. Waxaan xitaa soo xulay oo aan si hagaagsan music iyo iPad synced la Lugood. Waxaan la yaabanahay in aan weli 33 songs tagay on my iPad ka dib markii ay u hagaagsan. Waxaan markaas la doortay music ah u hagaagsan mar kale oo weli waxaan haystaa tus ka mid ah. Fikrad kasta oo sida aan tirtiri kartaa heeso ka iPad ah? Baan ka cararayaa OS cusub ee ku saabsan iPad.
Heeso aad u badan oo nuqul on your iPad gubtay muda ah meel. Waxa kale oo ka dhigaysa in ay adag tahay in la helo heeso aad doonayay. Haddii gabayadii nuqul ayaa sidoo kale kombiyuutarka ama Lugood Library, in aad marka hore ka saari kara heesaha oo ku yaal, oo markaas u hagaagsan Lugood aad iPad markii labaad. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad dhibaato la mid ah sida kor ku xusan jaallahay leeyahay, Waxaan ka cabsi qabaa in nidaamka Lugood ma shaqeyn doonaan.
Saraaxa, Apple kuu ogolaanaya in aad tirtirto heeso ka mid iPad ka mid. Laakiin laga yaabaa in aad image haddii aad leedahay in ka badan 300 songs nuqul u baahan in la tirtiro? Waa niyad jab, soo maaha? Xaaladdan oo kale, ayaan si adag ugu talinaynaa in aad isku daydo iPad Tababaraha - WWondershare TunesGo (Windows) ama Wondershare TunesGo (Mac) . Labada versions of software awood aad tirtirto songs nuqul on iPad in Dufcaddii.
Fiiro gaar ah: Labada qeybood oo kuu oggolaanaysa in aad tirtirto songs nuqul ka iPad mini, iPad bandhigay isha, iPad Cusub, iPad iyo iPad 2 marka ay macruufka waa macruufka 5, 6 ama 7.
Sidee in ay tirtirto songs nuqul on iPad
Tutorial hoose wuxuu kuu sheegayaa sida ay tirtirto iPad songs nuqul la version Windows - TunesGo Wondershare. Users Mac qaadi karaan tallaabooyinka ka mid ah marka la isticmaalayo TunesGo (Mac) si ay u masixi songs nuqul ka iPad.
Tallaabada 1. Isku aad iPad in kombiyuutarka
Ku rakib oo ay maamulaan TunesGo on your computer, iyo xiriiriyaan iPad in kombiyuutarka la cable USB ah. Ka dib markii la ogaado, aad iPad ku tusi doonaa ilaa uu furmo suuqa hoose.
Tallaabada 2. Ka saar songs nuqul on iPad
Tiirka bidix, guji "Media". By default, suuqa kala Music ayaa lagu muujiyay on Murayaad saxda ah. Haddii aad riixi "Movies", "TV muujinaysaa", iwm on line ugu sareeya ee ugu dambeeyey, waa in aad ku dhufo "Music" inay soo qaadaan suuqa kala music ah.
Waxaad arki, heesaha oo dhan on your iPad ku qoran yihiin. Haddaba taga oo u ka heli gabayadii nuqul. Calaameeyey, oo guji "Delete". Inta lagu guda jiro habka song ka saarida, hubi in aad iPad ku xiran waqtiga oo dhan.
Si wanaagsan baad yeeshay! Waxaad ku guuleysatay inay ka saarto heeso nuqul on your iPad. Markaas, waxaad isticmaali kartaa TunesGo in ay dajiyaan ama dhoofin files aad jeceshahay, sida filimada, sawiro, podcasts. Waxa aad u yaab waa inaysan marnaba ka saaraysaa files hadda on your iPad inta lagu jiro hanaanka wareejinta faylka.
Download TunesGo in ay isku dayaan sidii ay u soo saarto heeso nuqul ka iPad.
Daawo Video in ay tirtirto nuqul Songs on iPad
Bedelka Photos ka iPad in USB Flash Drive
Sida loo duug ipod wareejiyo music in iphone / iPad
Siyaabo Top soo dir fariimaha qoraalka ka iPad
Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray Videos ka iPad
qashinka iPad karo - Sidee inuu ka soo kabsado files tirtiray on iPad
10ka Best Apps Yididiilo Volume u iPad
Delete Photos nuqul on iPad ee macruufka 9/8/7
Sida loo Guba iPad Air videos in DVD
Sidee si ay u gudbiyaan Photos, Video, Xiriirada, Calendar, iMessages iyo Music ka iPod
3 Siyaabaha kaabta iPad hor CUSBOONAYSIINTA in macruufka 8